Download Certified Ethical Hacker (CEH) v.9 TOOLS download ~ ဘလော့ခရီးသည်
Download Certified Ethical Hacker (CEH) v.9 TOOLS download
CEH = Certified Ethical Hacker . International Council of E-Commerce Consultants
ကနေ ကြီးမှူးကျင်းပပေးတဲ့ Security Training Program တစ်ခုပါ။ CEH ဆိုတာ Hacking နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Basic Concept တွေကို နားလည်အောင် သင်ကြားပေးတဲ့ Training Programပါ။ သူ့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က Hackers are here . . Where are you? တဲ့ဗျ။ သိထားရမှာက CEH က Hacker သင်တန်းမဟုတ်ပါဘူး။ Hacking နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Educate လုပ်ပေးတဲ့နေရာပါ။ Ethic, Tech , Idea တွေ အစုံအလင် ပါဝင်ပါတယ်။ CEH V.9 ထွက်တာ ကြာနေပါပြီ။ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေ လေ့လာလို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ PDF + Tool အနေနဲ့ လာတာဆိုပေမယ့် PDF တွေ တင်ပြီးပြီမို့ TOOLS တွေ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
DOWNLOAD LINK = >
Module 01 Footprinting and Reconnaissance Module 02 Scanning Network
Module 03 Enumeration
Module 09 Denial of Service
Module 14 Hacking Wireless Networks
Module 16 Evading IDS, Firewalls and Honeypots
Module 19 Cryptography
***** Posted in: Download ဆိုင်ရာများ, Hacking